USteven Pienaar ubonge abalandeli ememezela ukuthi usethi khumu ebholeni | News24
USteven Pienaar ubonge abalandeli ememezela ukuthi usethi khumu ebholeni
Cape Town - Lowo owake wagijima kwiBafana Bafana uSteven Pienaar usememezele ngokusemthethweni ukuthi usewabeka ethala amakhokho kulandela iminyaka engu-18 edlala ibhola elikhokhelayo.
UPienaar, oshiye iBidvest Wits ngemuva kwezinyanga eziyisithupha eyijoyinile ngoJulayi wonyaka owedlule, ubengumdlali ongacopnsi phansi emazweni omhlaba kulandela ukumela amakilabhu amaningi amakhulu ase-Europe.
"Namhlanje ngimemezela ukuthatha umhlalaphansi ebholeni likanobhutshuzwayo," kusho uPienaar kwi-video ayifake enkundleni yezokuxhumana uTwitter.
"Ngithanda ukubonga umama wami, umndeni kanye nawo wonke amakilabhu esengake ngawadlalela kanjalo nabalandeli, nginganikhohlwa kanjani kodwa.
"Ngiyabonga ngothando eningitshengise lona. Niqhubeke nokungilandela ezinkundleni zokuxhumana ngoba kukhona isimemezelo esikhulu esizayo, kanti nizoba ngabokuqala ukusizwa.
"Ngiyabonga ngothando eningitshengise lona."
Lo mdlali, 35, waqala ukudlala ibhola elikhokhelayo kwi-Ajax Cape Town eneminyaka engu-18 ubudala ngaphambi kokuyodlalela i-Ajax Amsterdam lapho afike ahlabana khona ne-Eredivisie kabili ngo-2002 nango-2004.
Waba ngukaputeni weBafana waphinde wadlalela iqembu lesizwe izikhawu ezingu-61.